Jurgen Klopp oo ka warbixiyay horumarka dhawaacii ka soo gaaray Mohamed Salah Finalkii Champions League – Gool FM
Jurgen Klopp oo ka warbixiyay horumarka dhawaacii ka soo gaaray Mohamed Salah Finalkii Champions League
(LIverpool) 22 Luulyo 2018. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa daaha ka qaaday hormarka dhaawacii Mohamed Salah kasoo gaaray kulankii finalka Champions League ay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay ku wada ciyaareen Real Madrid.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu bixiyay macalinka reer Germany Jurgen Klopp kaasoo uu kaga hadlay xaalada Salah.
Klopp ayaa dhinaca kale sheegay in xili kasta ay xiriir toos ah la sameenayeen xiriirka kubada cagta ee dalka Masar koobkii aduunka 2018 ee dalka Russia, si ay u ogaadaan xaalada dhaawaca ee Mohamed Salah.
“Salah wuxuu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Liverpool Jimcihii, wuxuu si fiican kaga soo kabtay dhaawacii uu qabay”.
“Waxaan si aad ah ula xiriirnay xiriirka kubada cagta ee dalka Masar, si loo dabagalo caafimaadkiisa”.
Salah, iyo saaxiibkiis reer Senegale Sadio Mané ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda Liverpool Jimcihii.
“Salah wuxuu u muuqdaa mid si aad ah ugu raaxeesanaya isla markaana ku faraxsan dib ugu soo laabashadiisa Tababarka kooxda Liverpool”.
“Leroy Sané wuxuu heystaa xili ciyaareed cusub uu kusii hormarin karo awoodiisa ciyaareed”… Guardiola oo talooyin muhiim ah u diray Sané